inkaar of Musa on binu Israa'iil Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
inkaar of Musa on binu Israa’iil
Si aan u sahalno raadraaca taariikhda reer binu Israa’iil waxa aan doonayaa in aan dhiso taxane waqtiyada tilmaamaya taariikhdooda. Waxaan bilaabi taariikhda reer binu Israa’iil gelinayana nebiyada kuwooda loogu aqoonsan yahay ee Kitaabka Quduuska ah ilaa iyo wakhtiga Nabi Ciise Masiix (NNKH) ee wakhti taariikhdiisa.
Nabiyadda kuwooda loogu aqoonsan yahay ee Kitaabka Quduuska ah
Waqtiga taxanaha waxa uu isticmaalaa kalandarka reer Galbeedka (oo taas ku xasuusan karto waa guud ahaan BC ama wakhtigii BCE). Dhererka ee ulaha gudban ka muujinaysaa wakhtiga nebi gaar ahi uu noolaa. Ibraahim iyo Muuse (NNKH) ay muhiim u yihiin Calaamadahooda ay aannu horay u eegnay. Daawood (ama Daa’uud – NNKH) la aqoonsan yahay, waayo, wuxuu bilaabay Sabuur iyo waxa uu ahaa boqorkii ugu horeeyey ee bilaabay saldanooyinkii u talin jiray Yeruusaalem. Nabi Ciise Masiix (NNKH) waa muhiim sababtoo ah waxa uu xudun u yahay Injiilka.
Waxaan u aragnaa in muddo ah oo cagaaran ay reer binu Israa’iil ku noolaayeen Masar ahaayeenna kuwo addoommo ah oo la addoonsado.
Ku noolaayeen sidii addoommo ah Fircoon ee Masar
Tani waxay ahayd muddo waqti bilaabay markii Yuusuf (ama Joseph) awow-weyn uu u ahaa Ibraahim (NNKH) Qoladiisa u horseeday Masar, laakiin waxay halkaas addoommo u noqdeen. Muuse (NNKH) uu hogaaminayey reer binu Israa’iil ka soo bixiyey Masar Calaamadda Kormaridda. Sidaas wakhtiga Muuse (NNKH) taariikhda reer binu Israa’iil ay isbedellaysaa oo waxaa haatan lagu muujiyey jaalaha ah.
Ku noolaa Dhulka – laakiin uusan ka jirin Boqor Yeruusaalem
Yeruusaalem Waxay ku nool yihiin dalka reer binu Israa’iil (ama Falastiin). Muuse (NNKH) ku dhawaaqey Barakada iyo Inkaarta iyaga wakhtiga dhamaadka naftiisa – marka waqtiga uu aadayo kan cagaaran ka jaalaha ah. Sidaas dhowr boqol oo sano reer binu Israa’iil waxay ku nool yihiin dalkii loogu ballanqaaday Calaamadda 1 ee Ibraahim. Si kastaba ha ahaatee, iyagu ma ay lahayn Boqor, mana aysan haysan Caasimmadda magaalada Yeruusaalem- Waxaa leh dadka kale ee waqtigan aan ku jirno. Si kastaba ha ahaatee, soo diristii Daawood (ama David) oo 1000 BC u dhow axwaalkii Israa’iil ayaa isbadelay.
Kul Noolayeen boqorradda Yerusaalem deggan wakhtiga Daa’uud iyo ka dib
Daa’uud (NNKH) ku guulaystay in uu qabsado Yeruusaalem iyo isaga oo magaalada ka dhigtay caasimada halkaas oo noqotay qasriga boqorka oo uu ku subkay Boqorka Nabi Saamweel (NNKH). Oo uu wiilkiisa Suleemaan (ama Sulaymaan), ayaa sidoo kale caan ku ahaa xigmaddihiisii, ayaa xukumay oo xukunkii dhaxlay. Suleemaan baa u dhisay Ilaah macbad la yaab leh kana dhisay Yeruusaalem. Wiilashii ka soo farcamay boqor Daa’uud ayaa sii waday in ay xukumaan qiyaastii 400 oo sano oo xilligan ka muuqda dilka buluug ah (1000 – 600 BC). Tani waxay ahayd muddaddii ammaanta reer binu Israa’iil ah – Waxay bilaabeen in ay arkaan Barakooyinkii loo ballanqaaday. Waxay ahaayeen awood caalami ah, lahaa bulsho heer sare ah, lahaa dhaqan, xadaarad, macbud ah oo taasuna waxay ahayd muddada markii nebiyo badan oo loo soo dhiibay farriimaha Ilaah oo lagu diiwaan geliyay Sabuur nebi Daa’uud na uu bilaabay. Laakiin sababta oo halkaas joogay nebiyo badan oo loo soo diray, maxaa yeelay, reer binu Israa’iil oo aad ugu batay musuqmaasuq, caabudaya Sanamyo, oo ku caasiyey Tobanka Ammar. Markaasuu Ilaah u soo diray nebiyo si ay iyaga ugu digaan oo ay xusuusiyaan in lagu Lacnaday habaarkii nebi Muuse oo uu iyaga ku soo kor dheci doono. Laakiinse reer binu Israa’iil ma aysan dhegaysan. Sidaas daraaddeed ugu dambeyntii ku dhawaad ​​600 BC Lacnadii ayaa timid oo timid si run ah. Nebukadnesar, Boqor awood badan ayaa ka yimid Baabuloon – Iyo sida Muuse ayaa saadaaliyay in uu soo habaaray, markii uu ku qoray
“Rabbigu wuxuu meel fog oo dhulka darafkiisa ah idinkaga keeni doonaa quruun sida gorgorka u duulaysa oo aydaan afkeeda garanayn, oo ah quruun weji cabsi badan, oo aan dadka waayeelka ah maamuusin, aan dhallaankana u nixin. Oo dadkaasu wuxuu cuni doonaa midhaha xoolihiinna iyo midhaha dhulkiinna, ilaa aad baabba’daan, oo weliba idiinkama tegi doono hadhuudh, iyo khamri, iyo saliid, iyo dhasha lo’diinna, iyo tan idihiinna, ilaa uu idin halligo. Oo meel kasta oo dhulkiinna ah ayuu dhammaan irdihiinna idinku hareerayn doonaa ilaa derbiyadiinna deyrka dheer ee aad isku hallayseen ay soo wada dhacaan, oo wuxuu idinku hareerayn doonaa irdihiinna oo dhan ee dhulka Rabbiga Ilaahiinna ahu uu idin siiyey oo dhan”. (Sharciga Kunoqoshadiisa 28:49-52)
Nebukadnesar ayaa qabsaday Yeruusaalem kuna guulaystay, waa uuna gubay, oo uu baabbi’iyey Macbadka uu dhisay Suleemaan. Ka dibna wuxuu soo kaxaystay reer binu Israa’iil oo uu u masaafuriyey intooda badnayd guud ahaan dhulkiisa aadka u baaxad weyn ee Baabuloon Boqortooyadooda laga xukumay. Reer binu Israa’iil kuwoodii miskiiniinta ahaa oo keliya ayaa ku hadhay. Waxaa la dhamaystirray oo rumoobay saadaashii nebi Muuse:
“Oo sidii Rabbigu idiinku farxay inuu wanaag idiin sameeyo oo uu idin badiyo, ayuu sidaas oo kale ugu farxi doonaa inuu idin halligo oo idin baabbi’iyo, oo idinka waa laydinka rujin doonaa dalka aad ugu socotaan inaad hantidaan. Oo Rabbigu wuxuu idinku kala dhex firdhin doonaa dadyowga oo dhan, iyo tan iyo dunida geesteed iyo ilaa geesteeda kale, oo halkaas waxaad ugu adeegi doontaan ilaahyo kale oo qoryo iyo dhagax ah oo aydaan aqoon idinka iyo awowayaashiin toona.” (Sharciga Kunoqoshadiisa 28:63-64)
Ayaa ku habsaday kana guulaystay oo haddana u musaafuriyay Baabuloon
Sidaas aawadood 70 sano, mudada ku cad casaanka, Reer binu Israa’iil oo ku noolaa sidii qaxootiga oo kale oo ka fog dhulkii loogu Ballanqaaday. Ka dib markuu Boqorkii reer Faaris ahaa Kuuros (Cyrus) ka guulaystay Baabuloon iyo Kuuros oo noqday qofka ugu awoodda badan dunida oo dhan, isna wuxuu soo saaray amar ah in la ogolaaday reer binu Israa’iil inay ku soo laabtaan dalkooda.
Ku noolaayeen dhulka sidii iyaga oo qayb ka mid ah reer Faaris Boqortooyadoodii
Si kastaba ha ahaatee, ma aysan ahayn dal madaxbannaan, waxay haatan ahaayeen gobol ka mid ah gobollada reer Faaris ee ka mid ahaa boqortooyada reer Faaris. Tani waxay sii waday 200 sano oo lagu muujiyay qaybta basaliga ah ee waqtiga taxanaha. Inta lagu jiro wakhtigan Macbadka la dhisay (oo loo yaqaan Macbadka 2aad) iyo nebiyada ugu dambeeysteen ee Axdiga Hore fariimahooda ay wacdiyeen. Oo markaas Alexander the Great (Boqor ugu weyn ee dalka Giriiga) ka guulaystay Boqortooyadii reer Faaris iyo reer binu Israa’iil oo uu u sameeyey gobol ka mid ah boqortooyadiisa kaasoo sidoo kale sii socday 200 sano oo kale. Sidaas waxaa muujiyay waqtiga buluuga ah ee madow.
Ku noolaa dhulkii qayb ka mid ah Boqortooyadii reer Giriig. Wakhtigii Alexander the great ka dib.
Markaas Roomaankii ayaa ka adkaaday Boqortooyadii Giriiga oo Israiil ay noqotay gobol gobollada ka mid ah ee Boqortooyadii Weynayd ee Roomaanka. Reer binu Israa’iil ayaa mar kale noqday gobol ka mid ah Boqortooyadii Roomaanka oo waxaa lagu muujinayaa qaybta huruuda ah. Nebi Ciise Masiix ayaa ku noolaa Israa’iil waqtigan. Tani waxay sharaxaysaa sababta ay u jirto Guddoomiye ah Roomaan iyo askari Roomaan ay ku jirto qoraalkii Injiilka dhamaantiis oo lagu xusay kana buuxdo Injiilka – Maxaa yeelay dadka Roomaanka ah waxay xukumeen Yuhuudda dhulkooda wakhtigii uu noolaa nebi Ciise Masiix.
Ku Noolaa dhulka qayb ka mid ah Boqortooyadii reer Roomaanka
Si kastaba ha ahaatee, laga bilaabo wakhtiga reer Baabuloon (600 BC) reer binu Israa’iil (ama Yuhuudda sida hadda loogu yeedho) aan weligood ahaanin madax banaani mar kale sidii ay u ahaan jireen dad madax bannaan wakhtigii ay ku hoos jireen boqorradii dalka Daa’uud ama Daawood. Waxaa xukumay madaxda dawladaha kale ee dadka kale. Way neceen tan oo ka dib sarakicidda Ciise Masiix ayeey fallaagoobeen kana soo horjeesteen xukunkii Roomaanka. Dagaalkii madaxbanaanida ayaa bilaabay. Laakiin Yuhuuddu dagaalkan waa ay ku guulaysan waayeen. Dhab ahaantii Roomaankii ayaa yimaadeen oo Yeruusaalem baabbi’iyey, hoos u gubay Macbadka 2aad oo masaafuriyey Yuhuuddii sidii addoommo oo kale guud ahaan Boqortooyada Roomaanka dhexdeeda. Tan iyo markii Boqortooyadda oo ahayd mid baaxad weyn Yuhuuddu waxaa lagu kala firdhiyey dunida oo dhan.
Yeruusaalem iyo Macbadka laga burburiyay Roomaankii 70 AD. Reer Yuhuudda loo diray adduunka oo idil
Oo kanu waa sida ay ku noolaayeen muddo ku dhow 2000 oo sannadood: kala firdhay, burbursan, oo ku nool dalalka shisheeye oo aan marnaba loo aqbalin ee dalalkan. Waa erayadii Muuse siiyey in habaara ahayd sidii ay ku qornayd
“ Oo quruumahaas dhexdooda istareex kama heli doontaan, oo cagtiinnuna ma nasan doonto, laakiinse Rabbigu wuxuu halkaas idinku siin doonaa qalbigariir, iyo indhabbeel, iyo naf dulloobid.” (Sharciga Kunoqoshadiisa 28:65)
Sidaas ayaa Lacnadii Muuse ku rumoowday? Haa, waxay ahaayeen, iyo in ay si faahfaahsan oo kasta. Lacnada ka dhanka ah reer binu Israa’iil oo la siiyey in ayna aan weydiin Yuhuudda waxay sameeyeen:
“Markaasay quruumaha oo dhammu odhan doonaan: ‘Rabbigu muxuu dalkan sidaas ugu galay? Oo kulaylka xanaaqan weyn micnihiisu waa maxay?”
“Markaasaa dadku waxay odhan doonaan: “Maxaa yeelay, iyagu waxay ka tageen axdigii uu Rabbiga ah Ilaaha awowayaashood la dhigtay markuu ka soo bixiyey dalkii Masar” (Sharciga Kunoqoshadiisa 29:24-25)
Tani waa calaamad muhiim noogu ah si ay u qaataan digniinaha Nebiyadda si dhab ah – Maxaa yeelay, waxaa u jiri doona digniin innaga oo dhan. Dabcan tani waa sahan taariikheed kor u kacayo oo ku saabsan 2000 sano ka hor oo keliya. Riix halkan in la arko sida barakooyinka iyo inkaaraha Nebi Muuse (NNKH) soo gabagabeeyay wakhtigeenna casriga ah.